မြေနုကျွန်းကိစ္စ လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှု အခင်းဖြစ်နေချိန် ဗွီဒီယိုဖိုင် ထွက်ပေါ်လာ - Sa Ka War
ကြောက်မက်ဖွယ် မကွေးတိုင်း ရေနံချောင်းမြို့နယ် ဖရဲကျွန်းကျေးရွာက လူအစုလိုက် အပြုံလိုက် အသတ်ခံရမှုကို အခင်ဖြစ်ပွားချိန် ရဲတွေစီးလာတဲ့ စက်လှေပေါ်ကနေ လှမ်းရိုက်ထားပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရေနံချောင်းမြို့နယ် ဖရဲကျွန်းကျေးရွာက ရွာသူရွာသားတွေအစုအပြုံလိုက် အသတ်ခံရမှု Video သက်သေ File ပါ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရေနံချောင်း မြို့နယ်အတွင်း ဖရဲကျွန်းကျေးရွာနှင့်ကန်သာကျေးရွာတို့ ၂၃.၇.၂၀၁၉ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် မြေနုကျွန်းကိစ္စ စကားများကြားရာ ဖရဲကျွန်းကျေးရွာမှလူ ၃၉ဦးပျောက်ဆုံးနေပြီး ၂၀လောင်းကျော် ပြန်လည်တွေ့ရှိရာ အလောင်းတွင် သိသာသော အသတ်ခံ ရသည့် ဒဏ်ရာများ ပါကြောင်းလဲသိရပါတယ်…။
သေဆုံးအလောင်းများကို ပြန်လည်တွေ့ရှိချိန်မှာ ၊ ဓားဒဏ်ရာများ ၊ ရဲတင်းနဲ့ အခုတ်ခံထားရလို့ လက်ပြတ် နေသူများ ၊ မျက်လုံးပေါက်ထွက် ဒဏ်ရာများ ၊ ခေါင်းဖြတ် ခံထားရသူများ ၊ တစ်ဉ်ီးမှာသံကြိုးများနှင့် ချည်ပြီး အသတ်ခံထားရသည်များကိုလဲ တွေ့ရပါတယ်….၊
အသက်ရှင် လွတ်မြောက်လာသူများမှာလဲ ဓားဒဏ်ရာများ လေးခွ ဒဏ်ရာများ အပြည့်နဲ့ သူတို့ပြောပြချက်အရ “အသံချဲ့စက်နဲ့ အော်ကာလူစုပြ်ီး သတ်သည် ဖြစ်ကြောင်း ၊ နောက်တစ်ခါ ဒီမြေကို ပြန်ယူချင်ဉ်ီးမလားဆိုပြ်ီး မေးမေး သတ်သည်ဖြစ်ကြောင်း ” သိရပါသည်….၊ သေးဆုံးသူများထဲတွင် အသက် ၁၂ နှစ် အရွယ် ကလေးတစ်ဦးလဲပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်….၊
ဖရဲကျွန်းကျေးရွာ အပိုင် မြေနေရာတွင် ၁၅ နှစ်စာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ခွင့် စာချုပ်နှင့် အငှါးချထားခဲ့ ပေမယ့် စာချုပ်သက်တမ်းကုန်သည်အထိ ကန်သာ ကျေးရွာမှ ဖယ်မပေးသည့်အပြင် ၄င်းမြေနေရာပေါ်တွင် နေအိမ်များဆောက်လုပ်လာသည့်အတွက် ၂၀.၈.၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ရေနံချောင်းမြို့နယ် ထွေအုပ်ထံ တိုင်တန်း ခဲ့ ခြင်းအပေါ် အရေးယူဖြေရှင်းပေးခဲ့ခြင်း မရှိသည့်အတွက် ၁၂.၉.၂၀၁၈ နေ့တွင် ခရိုင်ထွေအုပ်ထံ တိုင်တန်းခဲ့သော်လဲ အရေးယူဖြေရှင်းပေးခြင်း မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်….။
ထို့နောက် ၄င်းမြေမှာလဲ ယခုလက်ရှိ ဖရဲကျွန်းကျေးရွာ အတွက် စာသင်ကျောင်းဆောက်ရန် နေရာသတ်မှတ် ထားသော မြေနေရာဟု သိရပါတယ်….၊
အသတ်ခံရမှ လွတ်မြောက်လာသူတွေမှ ပြောပြချက်အရရော အခင်းဖြစ်စဉ်နေရာမှာ အသတ်ခံရမှာစိုးသည့်အတွက် ပုန်း နေသည့်သူများမှ ပြောကြားချက်အရ ” ဒါဟာ လူသတ်မှူ့ကြီးပါ
ဖရဲကျွန်းကျေးရွာက ရွာသူရွာသားတွေအစုအပြုံလိုက် အသတ်ခံရမှု Video
မြေနုကျွန်းကိစ္စ လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်နေတဲ့ (ဗွီဒီယိုဖိုင်) ထွက်ပေါ်လာ————————-ဇူလိုင်(၂၇) AlinnMyay(အလင်းမြေ)ကြောက်မက်ဖွယ် မကွေးတိုင်း ရေနံချောင်းမြို့နယ် ဖရဲကျွန်းကျေးရွာက လူအစုလိုက် အပြုံလိုက် အသတ်ခံရမှုကို အခင်ဖြစ်ပွားချိန် ရဲတွေစီးလာတဲ့ စက်လှေပေါ်ကနေ လှမ်းရိုက်ထားပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်လို့ ယူဆရပါတယ်။အဆိုပါ သတင်း နှင့် ဗွီဒီယိုဖိုင်ကို ကိုစည်သူမောင် အကောင့်မှ ကူးယူဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။———————————ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရေနံချောင်းမြို့နယ် ဖရဲကျွန်းကျေးရွာက ရွာသူရွာသားတွေအစုအပြုံလိုက် အသတ်ခံရမှု Video သက်သေ File ပါ===============================မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရေနံချောင်း မြို့နယ်အတွင်းဖရဲကျွန်းကျေးရွာနှင့်ကန်သာကျေးရွာတို့ ၂၃.၇.၂၀၁၉ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် မြေနုကျွန်းကိစ္စ စကားများကြားရာဖရဲကျွန်းကျေးရွာမှလူ ၃၉ဦးပျောက်ဆုံးနေပြီး ၂၀လောင်းကျော် ပြန်လည်တွေ့ရှိရာ အလောင်းတွင် သိသာသော အသတ်ခံရသည့် ဒဏ်ရာများ ပါကြောင်းလဲသိရပါတယ်…။သေဆုံးအလောင်းများကို ပြန်လည်တွေ့ရှိချိန်မှာ ၊ဓားဒဏ်ရာများ ၊ ရဲတင်းနဲ့ အခုတ်ခံထားရလို့ လက်ပြတ်နေသူများ ၊ မျက်လုံးပေါက်ထွက် ဒဏ်ရာများ ၊ ခေါင်းဖြတ်ခံထားရသူများ ၊ တစ်ဉ်ီးမှာသံကြိုးများနှင့် ချည်ပြီးအသတ်ခံထားရသည်များကိုလဲ တွေ့ရပါတယ်….၊အသက်ရှင် လွတ်မြောက်လာသူများမှာလဲ ဓားဒဏ်ရာများလေးခွ ဒဏ်ရာများ အပြည့်နဲ့ သူတို့ပြောပြချက်အရ"အသံချဲ့စက်နဲ့ အော်ကာလူစုပြ်ီး သတ်သည် ဖြစ်ကြောင်း ၊နောက်တစ်ခါ ဒီမြေကို ပြန်ယူချင်ဉ်ီးမလားဆိုပြ်ီး မေးမေးသတ်သည်ဖြစ်ကြောင်း " သိရပါသည်….၊သေးဆုံးသူများထဲတွင် အသက် ၁၂ နှစ် အရွယ်ကလေးတစ်ဦးလဲပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်….၊———————–ကနဦးဖြစ်စဉ်မှာ……၊ဖရဲကျွန်းကျေးရွာ အပိုင် မြေနေရာတွင် ၁၅ နှစ်စာလုပ်ကိုင်စားသောက်ခွင့် စာချုပ်နှင့် အငှါးချထားခဲ့ပေမယ့် စာချုပ်သက်တမ်းကုန်သည်အထိ ကန်သာကျေးရွာမှ ဖယ်မပေးသည့်အပြင် ၄င်းမြေနေရာပေါ်တွင်နေအိမ်များဆောက်လုပ်လာသည့်အတွက် ၂၀.၈.၂၀၁၈ရက်နေ့တွင် ရေနံချောင်းမြို့နယ် ထွေအုပ်ထံ တိုင်တန်းခဲ့ ခြင်းအပေါ် အရေးယူဖြေရှင်းပေးခဲ့ခြင်း မရှိသည့်အတွက်၁၂.၉.၂၀၁၈ နေ့တွင် ခရိုင်ထွေအုပ်ထံ တိုင်တန်းခဲ့သော်လဲအရေးယူဖြေရှင်းပေးခြင်း မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်….။ထို့နောက် ၄င်းမြေမှာလဲ ယခုလက်ရှိ ဖရဲကျွန်းကျေးရွာအတွက် စာသင်ကျောင်းဆောက်ရန် နေရာသတ်မှတ်ထားသော မြေနေရာဟု သိရပါတယ်….၊—————————–အသတ်ခံရမှ လွတ်မြောက်လာသူတွေမှ ပြောပြချက်အရရောအခင်းဖြစ်စဉ်နေရာမှာ အသတ်ခံရမှာစိုးသည့်အတွက် ပုန်းနေသည့်သူများမှ ပြောကြားချက်အရ " ဒါဟာ လူသတ်မှူ့ကြီးပါလူမဆန်စွာ သတ်ကြတာပါ ၊ အသတ်ခံရတဲ့ ကျနော်တို့ ဘက်မှာဘာလက်နက်မှ မပါပါဘူး ၊သူတို့က အသံချဲ့စက်နဲ့ အော်ပြ်ီးလူစုသတ်တာ ၊ ဓားတွေ လှံတွေ လေးခွတွေ ပါကြတယ်သတ်ပြီးတော့ စက်လှေဖောက်ပြ်ီး နစ်ပစ်လိုက်ကြတာ ၊ ဒါဟာ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ရေနစ်သေမှူ့ဖြစ်ကြတာလဲ ၊သေဆုံးသူအလောင်းတွေက ဒဏ်ရာတွေကို ကြည့်ရင်သိသာပါတယ်လို့ " ပြောကြပါတယ် ……။—————————ဒီလူသတ်ခံရမှူ့ဟာ ဆိုးရွားလွန်းလှတယ် ၊ ဒါကို နိူင်ငံတော်သမ္မတကြီးက အစ သိရှိပြီး အမှူ့မှန်ပေါ်ပေါက်နိူင်အောင်ကူညီပေးစေချင်ပါတယ်……။.သတင်း ဗွီဒီယို – စည်သူမောင်AlinnMyay(အလင်းမြေ)
Posted by AlinnMyay on Friday, July 26, 2019
လူမဆန်စွာ သတ်ကြတာပါ ၊ အသတ်ခံရတဲ့ ကျနော်တို့ ဘက်မှာ ဘာလက်နက်မှ မပါပါဘူး ၊ သူတို့က အသံချဲ့စက်နဲ့ အော်ပြ်ီး လူစုသတ်တာ ၊ ဓားတွေ လှံတွေ လေးခွတွေ ပါကြတယ်
သတ်ပြီးတော့ စက်လှေဖောက်ပြ်ီး နစ်ပစ်လိုက် ကြတာ ၊ ဒါဟာ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ရေနစ်သေမှူ့ဖြစ်ကြတာလဲ ၊ သေဆုံးသူအလောင်းတွေက ဒဏ်ရာတွေကို ကြည့်ရင် သိသာပါတယ်လို့ ” ပြောကြပါတယ် ……။
ဒီလူသတ်ခံရမှူ့ဟာ ဆိုးရွားလွန်းလှတယ် ၊ ဒါကို နိူင်ငံတော် သမ္မတကြီးက အစ သိရှိပြီး အမှူ့မှန်ပေါ်ပေါက်နိူင်အောင် ကူညီပေးစေချင်ပါတယ်……။.
သတင်း ဗွီဒီယို – စည်သူမောင်
ကွောကျမကျဖှယျ မကှေးတိုငျး ရနေံခြောငျးမွို့နယျ ဖရဲကြှနျးကြေးရှာက လူအစုလိုကျ အပွုံလိုကျ အသတျခံရမှုကို အခငျဖွဈပှားခြိနျ ရဲတှစေီးလာတဲ့ စကျလှပေျေါကနေ လှမျးရိုကျထားပွီး မှတျတမျးတငျထားတဲ့ ဗှီဒီယိုဖိုငျလို့ ယူဆရပါတယျ။ ကွောကျစရာကောငျးတဲ့ မကှေးတိုငျးဒသေကွီးရနေံခြောငျးမွို့နယျ ဖရဲကြှနျးကြေးရှာက ရှာသူရှာသားတှအေစုအပွုံလိုကျ အသတျခံရမှု Video သကျသေ File ပါ
မကှေးတိုငျးဒသေကွီး ရနေံခြောငျး မွို့နယျအတှငျး ဖရဲကြှနျးကြေးရှာနှငျ့ကနျသာကြေးရှာတို့ ၂၃.၇.၂၀၁၉ ရကျနေ့ ညနပေိုငျးတှငျ မွနေုကြှနျးကိစ်စ စကားမြားကွားရာ ဖရဲကြှနျးကြေးရှာမှလူ ၃၉ဦးပြောကျဆုံးနပွေီး ၂၀လောငျးကြျော ပွနျလညျတှရှေိ့ရာ အလောငျးတှငျ သိသာသော အသတျခံ ရသညျ့ ဒဏျရာမြား ပါကွောငျးလဲသိရပါတယျ…။
သဆေုံးအလောငျးမြားကို ပွနျလညျတှရှေိ့ခြိနျမှာ ၊ ဓားဒဏျရာမြား ၊ ရဲတငျးနဲ့ အခုတျခံထားရလို့ လကျပွတျ နသေူမြား ၊ မကျြလုံးပေါကျထှကျ ဒဏျရာမြား ၊ ခေါငျးဖွတျ ခံထားရသူမြား ၊ တဈဉျီးမှာသံကွိုးမြားနှငျ့ ခညျြပွီး အသတျခံထားရသညျမြားကိုလဲ တှရေ့ပါတယျ….၊
အသကျရှငျ လှတျမွောကျလာသူမြားမှာလဲ ဓားဒဏျရာမြား လေးခှ ဒဏျရာမြား အပွညျ့နဲ့ သူတို့ပွောပွခကျြအရ “အသံခြဲ့စကျနဲ့ အျောကာလူစွုပျီး သတျသညျ ဖွဈကွောငျး ၊ နောကျတဈခါ ဒီမွကေို ပွနျယူခငျြဉျီးမလားဆွိုပျီး မေးမေး သတျသညျဖွဈကွောငျး ” သိရပါသညျ….၊ သေးဆုံးသူမြားထဲတှငျ အသကျ ၁၂ နှဈ အရှယျ ကလေးတဈဦးလဲပါဝငျကွောငျးသိရပါတယျ….၊
ဖရဲကြှနျးကြေးရှာ အပိုငျ မွနေရောတှငျ ၁၅ နှဈစာ လုပျကိုငျစားသောကျခှငျ့ စာခြုပျနှငျ့ အငှါးခထြားခဲ့ ပမေယျ့ စာခြုပျသကျတမျးကုနျသညျအထိ ကနျသာ ကြေးရှာမှ ဖယျမပေးသညျ့အပွငျ ၎င်းငျးမွနေရောပျေါတှငျ နအေိမျမြားဆောကျလုပျလာသညျ့အတှကျ ၂၀.၈.၂၀၁၈ ရကျနတှေ့ငျ ရနေံခြောငျးမွို့နယျ ထှအေုပျထံ တိုငျတနျး ခဲ့ ခွငျးအပျေါ အရေးယူဖွရှေငျးပေးခဲ့ခွငျး မရှိသညျ့အတှကျ ၁၂.၉.၂၀၁၈ နတှေ့ငျ ခရိုငျထှအေုပျထံ တိုငျတနျးခဲ့သျောလဲ အရေးယူဖွရှေငျးပေးခွငျး မရှိဘူးလို့သိရပါတယျ….။
ထို့နောကျ ၎င်းငျးမွမှောလဲ ယခုလကျရှိ ဖရဲကြှနျးကြေးရှာ အတှကျ စာသငျကြောငျးဆောကျရနျ နရောသတျမှတျ ထားသော မွနေရောဟု သိရပါတယျ….၊
အသတျခံရမှ လှတျမွောကျလာသူတှမှေ ပွောပွခကျြအရရော အခငျးဖွဈစဉျနရောမှာ အသတျခံရမှာစိုးသညျ့အတှကျ ပုနျး နသေညျ့သူမြားမှ ပွောကွားခကျြအရ ” ဒါဟာ လူသတျမှူ့ကွီးပါ
လူမဆနျစှာ သတျကွတာပါ ၊ အသတျခံရတဲ့ ကနြျောတို့ ဘကျမှာ ဘာလကျနကျမှ မပါပါဘူး ၊ သူတို့က အသံခြဲ့စကျနဲ့ အျေွာပျီး လူစုသတျတာ ၊ ဓားတှေ လှံတှေ လေးခှတှေ ပါကွတယျ
သတျပွီးတော့ စကျလှဖေောကျွပျီး နဈပဈလိုကျ ကွတာ ၊ ဒါဟာ ဘယျလိုဖွဈပွီး ရနေဈသမှေူ့ဖွဈကွတာလဲ ၊ သဆေုံးသူအလောငျးတှကေ ဒဏျရာတှကေို ကွညျ့ရငျ သိသာပါတယျလို့ ” ပွောကွပါတယျ ……။
ဒီလူသတျခံရမှူ့ဟာ ဆိုးရှားလှနျးလှတယျ ၊ ဒါကို နိူငျငံတျော သမ်မတကွီးက အစ သိရှိပွီး အမှူ့မှနျပျေါပေါကျနိူငျအောငျ ကူညီပေးစခေငျြပါတယျ……။.
သတငျး ဗှီဒီယို – စညျသူမောငျ
Previous Article မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ကြက်တောင်မယ် သက်ထားသူဇာ LAGOS INTERNATIONAL BADMINTON ပြိုင်ပွဲတွင် ရှုံးနိမ့်ပြီး ပြိုင်ပွဲမှ ထွက်ခွာခဲ့ရ
Next Article မျက်စိမကောင်းတဲ့ အဘွားကို ငွေကြေးထောက်ပံ့လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ရွှေပိုးအိမ်